Ciidamada Sland oo xirxiray shaqaalaha hotel caan ah oo ku yaala Burco “Sababta ogoow”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSomalilandCiidamada Sland oo xirxiray shaqaalaha hotel caan ah oo ku yaala Burco “Sababta ogoow”.
Ciidamada Sland oo xirxiray shaqaalaha hotel caan ah oo ku yaala Burco “Sababta ogoow”.
August 31, 2019 marqaan Somaliland, Wararka maanta 2
Hotel lagu magacaabo Warsan Ethiopian Restaurant oo lagu sameeyo cunto itoobiyaanka oo ku yaaley magaalada Burco oo albaabada layskugu laabey.
Shaqaalihii ka shaqeynayay hotelka oo qaarkood xabsiga ladhigay.
Hotelkan ayaa habeenkii lagu caweyn jirey taasoo ay ka biyo diideen culimada gobolka Togdheer oo saameyntoodu xoogantahay.
Waxaana lacagta ugu badan geliyay dhismaha hotelka muwaadiniin udhashay Somaliland.
Kenya oo qaaday talaabo ay ugu aargudayso Axmed Madoobe “Goaan kanixiyay Villa Somalia”
Daawo:- Wararkii ugu dambeeyay Banaanbaxa Kismaayo + Ujeedka banaanbaxa oo weji kale yeeshay.
Goobaha Caweysyadu ku yaaliin ama ha ahaado Night club amd strip club ee Hargeisa iyo burco ku yaala waa in la wada xidha sababta oo ah waa Fusuq ummadda muslinka ah in laga ilaaliyo u baahan.
Laakin maxaa wax looga qaban waayey
1-Gay Cafe ee ku yaala Hargeisa ”’ London Cafe ”’
2-Lesbian Bar & Cafe ”’ Bar Toronto ”’
iyo Hotelo badan oo hargeisa ku yaala oo lagu xanto arimahaas iyo wax ka daran.
intaas oo dhan waxa furtay qurbo joogta ka kala timi Canada & U.k
Suldan Dab La Riday waan ku salaamay sxb.
CARRIGEENAN MAANTUU KUFRIGU CAGAHA SOO SAARAY
GUMEYSIGII CADIBAY SOOMALIDEE NAGA CASHIIMEYSTAY
CUDUD KUWII KU RAACAYE FARANJI U CASKAREYNAAYEY
KUWII CIIDA GADAY EE KAL HORE CIDAHA NOO JOOGAY
WAA CAJAA’IB NOOLOOW HADDII LOO CIMAAMADO’E
WAA U CAADADOODA IIDOOR INAY KUFRI CISEEYAANE
IYAGAA CABIIDKA U AHAA GAALADII CADANE
CAWARKII SUWEEN WEYDINKII CAAWIYOO WADDEY’E
IYAGAA CASHIIRO U AHAA COOMIRKII YURUBEE
WAA CALAAMADUU DHIGAY WAXEEY CIRIBSANAAYAANE
CINDIGABA MA GELIN INEY CALANKI QAATEENE
CITIRAAF AAD DOONTAA WARSOW TALO CARUUR MAAHA?